अलौकिक खेलहरू: बिरालो स्क्र्याच खेल
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	अलौकिक खेलहरू: बिरालो स्क्र्याच खेल
by Waylon जोर्डन मार्च 17, 2020
by Waylon जोर्डन मार्च 17, 2020 13,007 हेराइहरू
IHorror मा पारानोर्मल खेलहरूमा पुन: स्वागत छ जहाँ हामी तपाईंलाई क्रिपीष्ट, स्पोकिष्ट खेलहरू मार्फत लैजान्छौं जुन सेक्रेड हल अफ स्लीपओभर पास्टबाट। (ठीक छ, त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा छैन, तर यो राम्रो लाग्दछ, ठीक छ?) आज, हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं बिरालो स्क्र्याच खेल.
यी धेरै खेलहरूमा जस्तै यो पनी कहाँ सुरु भयो ठ्याक्कै पिन गर्न गाह्रो छ, तर यसको आफ्नै आकर्षण र यसको आफ्नै "खतराहरू" छन्। र यसले निश्चित रूपमा मनपर्ने प्यारानोर्मल खेलहरूको सूचीमा आफ्नो स्थान कमाउँछ।
का लागि वैकल्पिक नामहरू बिरालो स्क्र्याच खेल:
तपाईं संसारमा हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा, बिरालो स्क्र्याच खेल को रूपमा पनि चिनिन्छ कालो बिरालो स्क्र्याच र बिरालो खरोंचहरू.
केवल एक आरामदायी तकिया
तपाइँलाई कम्तिमा दुई व्यक्ति खेल्न आवश्यक छ बिरालो स्क्र्याच खेल।
यस विशेष खेलमा दुई मुख्य खेलाडीहरू कथा कथा हुन् - हो, तपाईंले सानो कथा भन्नु पर्ने छ - र विक्टिम।
कोठामा दुई भन्दा बढी व्यक्ति छन् भने, अन्यले चुप लागेर बस्नु पर्छ। यदि त्यहाँ गर्न पर्याप्त छ भने, कथा कथाकार र शिकार वरिपरि घेरा बनाउनुहोस्, तर फेरि, कुञ्जी तपाईको लागि धेरै शान्त हुनको लागि खेल खेल्दैछ।
कथावाचकले आफ्नो गोदमा तकिया राखेर भुइँमा क्रस-टांगे बस्नुपर्दछ र विक्टिमले आफ्नो टाउको तकियामा राखेर, उनीहरूको पछाडि सुत्नु पर्छ।
जब कोठा व्यवस्थित हुन्छ, कथा कथाकारले बिस्तारै र भद्रताका साथ भिक्टिमको मन्दिरहरू रभ्न सुरु गर्नुपर्दछ, जबकि तल मैले दुईवटा कथाहरूमध्ये एक पाएको छु जुन मैले पाए विकीलाई लुकाउनुहोस् र जानुहोस्.
कथा # १:
त्यहाँ एक पटक एउटी वृद्ध महिला थिई जससँग बिरालोको स्वामित्व थियो।
बिरालो धेरै राम्रो थियो।
यो meused र शुद्ध।
एक दिन, बिरालो कारले ठक्कर दिए र म died्यो।
बिरालो स्क्र्याच, बिरालो स्क्र्याच, बिरालो स्क्र्याच।
बुढो महिला एक नयाँ बिरालो भयो।
बिरालो एकदमै मतलब थियो।
यो फिसकियो र पन्जा।
ती वृद्ध महिलाले बिरालाहरू नलिने निर्णय गरे।
तपाईं राती अबेर गाढा गल्लीमा हिंड्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं त्यहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ।
वर्षा वर्षा संग जमीन चामल छ।
गल्ली फोहोर डिब्बा र कचराले भरिएको छ।
तर तपाईले केहि सुन्नुहुन्छ।
फोहोर क्यानमा एक आन्दोलन।
तपाईं आफ्नो गति छान्नुहुन्छ।
तपाई गल्लीबाट छिटो बाहिर जान चाहानुहुन्छ।
तर त्यसोभए तपाईंले केहि देख्नुभयो।
रातो आँखा। चहकिलो रातो बिरालो आँखा।
तिनीहरू एक ठूलो बिरालोको आँखा हो।
तपाईं भाग्नु हुन्छ तर बिरालोले तपाईंलाई खेद्छ र तपाईं माथि उफ्रन्छ।
यसले तपाईंलाई खरोंच गर्दछ: एक, दुई, तीन।
कथावाचकले माथिबाट कथाहरू मध्ये एक कथा लेख्ने बित्तिकै, विक्टिम तुरुन्तै उठेर आफ्नो शर्ट उठाउनु पर्छ। यद्यपि उनीहरूले यो महसुस गरेको महसुस गर्नुपर्दैनथ्यो, अब तिनीहरूको पछाडि तीन लामो, हल्का रातो खरोंच हुनेछ!
जबकि पछाडि निशानहरू देखापर्नुपर्ने कुनै निश्चित कारण छैन, इन्टरनेट सिद्धान्तहरू प्रशस्त छन्। यथार्थमा दृढ रूपमा खडा भएकाहरूले सुझाव दिएका थिए कि यसले भुइँमा पछारिनु मात्र पर्दछ, जबकि ती सम्भावितहरूले सम्भवतः यो सानो अनुष्ठानले भिक्टमा आक्रमण गर्ने राक्षसलाई बोलाउने सम्भावनाको सुझाव दिएका छन्।
जे भए पनि, यो सब भन्दा चाखलाग्दो खेल हो, के तपाईलाई लाग्दैन? हामीलाई टिप्पणीहरूमा तपाईंको आफ्नै सिद्धान्तहरू थाहा दिनुहोस्!
अधिक अलौकिक खेलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? चेक आउट गर्नुहोस् रातो ढोका, पहेंलो ढोका!
मा मान्छे यूट्यूब च्यानल शेन खेल खेल्नुभयो। तल तिनीहरूको नतीजा जाँच गर्नुहोस्!